'दैवीय शक्ति' पाउने अन्धविश्वासले छिमेकी बालककाे 'बलि'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'दैवीय शक्ति' पाउने अन्धविश्वासले छिमेकी बालककाे 'बलि'
जेष्ठ १६, २०७६ अजित तिवारी
जनकपुर — धनुषाको मिथिला नगरपालिका–६ ढल्केवरमा 'शक्तिशाली' हुने अन्धविश्वासले अढाई वर्षीय बालककाे बलि दिएकाे खुलेकाे छ । ढल्केवरका शम्भु साहका छोरा आर्यनको शव वैशाख २४ को बिहान घरनजिकैको बाँसघारीमा भेटिएको थियो । उक्त शव बलि दिएर फालेकाे प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भएकाे हाे ।
बालककाे हत्यामा संलग्न शत्रुधन महताेलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी । तस्बिर : अजित तिवारी । कान्तिपुर
मृतक बालककी आमा रेणुदेवी साह घाँस काट्न गएका बेला घरकाे ढाेकामै खेलिरहेका बालकलाई ५५ वर्षीय छिमेकी शत्रुधन महताेले ललाई फकाई अपहरण गरी बन्धक बनाएर राति २ बजे हत्या गरेकाे प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एसपी शेखर खनालले बताए ।
महताेले गर्ने धामीझाक्रीकाे काममा दखल बढाएर शक्तिशाली हुने अन्धविश्वासले आप्नै आँगनमा धारिलाे हतियारले रेटेर बालककाे हत्या गरेकाे खुलेकाे हाे । प्रहरीले महताेले हत्याका बेला लगाएका लुगा र प्रयाेग गरिएकाे धारिलाे हतियार समेत बरामद गरेकाे छ ।
बालकको हत्या आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेेर अनुसन्धान गरिरहेकाे थियाे । शव भेटिएकाे अघिल्लो साँझ हराएका बालकलाई आफन्तले अबेर रातिसम्म खोजतलास गर्दा भेटेका थिएनन् । बिहान उनकै घरदेखि करिब ७५ मिटरपूर्वको बाँसघारीमा शव भेटिएको थियो । घाँटीको पछाडिको भाग काटिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । अनुसन्धान बलितिरै केन्द्रित रहे पनि घटनास्थल र समयबारे अभियुक्तहरूको फरक–फरक बयानले छानबिन लम्बिएको थियाे ।
हत्या गर्ने बेला लगाएका लुगा र प्रयाेग गरिएकाे हतियार ।
प्रहरीले आर्यन हत्या प्रकरणमा शंका लागेका करिब ५० जनालाई हिरासतमा लिएर सोधपुछ गरेर छाडेको थियाे । साहका छिमेकी धामी शत्रुघन महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको हो ।
मिथिला नगरपालिका–८ कुसुमबिछौनाका ५२ वर्षीय जंगवीर महतो राजमार्ग क्षेत्रका चर्चित धामी हुन् । हालै झारफुक र टुनामुना सिकेका शत्रुघन उनकै सालो हुन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ १०:१६
व्यवस्था फेरियो, सोच फेरिएन
जेष्ठ १६, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
कसैले सोचेका थिएनन्, यति सजिलै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ भनेर  । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई पाखा लगाइदियो  ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । दलहरूले जति अहमता, जति घमन्ड गरे पनि यति सजिलै गणतन्त्र आउँछ भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको गणतन्त्रप्रतिको चाहनालाई साथ दिए । सुरुक्क नारायणहिटी राजदरबार, श्रीपेच, राजदण्ड सबै त्यागिदिए । अनि मुलुकमा सजिलै गणतन्त्र आयो ।
लोकतान्त्रिक संविधान पनि बन्यो । स्थानीय, संघीय ससद र प्रदेश संसदसम्म गठन भए । तीनै तहका सरकार बने । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फल उपभोग गर्न जनताले पाएका छैनन् । जनतालाई करमाथि कर थोपरिएको छ । विकास खर्चको नाममा नेताहरू पैसा असुलिरहेका छन् । १ वर्षमा सकिन पर्ने काम १० वर्षमा सक्दा पनि ठेकेदारलाई कारबाही हुँदैन । असली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यही हो ? जसले जे गरे नि हुने ? नेतालाई मस्ती जनतालाई सास्ती कहिलेसम्म हो ? व्यवस्था त फेरियो, तर नेताको नियत र सोचाइ फेरिएन । संस्कार फेरिएन । आफू ‘माथि’ जनतालाई ‘तल’को ठान्ने प्रवृत्ति फेरिएन । बिचौलिया संस्कृतिले राजनीति दुर्गन्धित बन्यो । जनता दिन–प्रतिदिन निराश बन्दैछन् । गणतन्त्रलाई नेताहरूले कमाइखाने भाँडो बनाए । विलासितामा रमाउने नेताहरूले आफ्नो कर्तव्य भुले । भोगविलासमा लिप्त भए । गणतन्त्रसँगै राम्रा संस्कार बस्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । यो नै हाम्रो दुर्भाग्य भयो ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७६ ०९:५६
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको सुझाव: 'अयोध्या' होइन, कोरोना र कालापानीमा ध्यान दिउँ
एनएचआरसीले 'प्लाज्मा थेरापी' बारे अनुसन्धान गर्ने, संक्रमणमुक्त भएकालाई प्लाज्मा दान गर्न आग्रह
प्रविधि विकास तथा अनुसन्धानका लागि नास्टद्वारा २ करोड ३२ लाखको अनुदान प्रदान
प्रधानमन्त्री ओलीले राम जन्मभूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिको नेकपा नेताहरुबाट आलोचना
पछिल्लो २४ घन्टामा ११६ कोरोना संक्रमित थपिए, ३४ डिस्चार्ज
अपडेटः मंगलबार, ३० असार, २०७७ । १४ : १० बजे